Alpro Oat Longlife mmiri ara ehi Alternative 1 Liter | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Alpro Oat Longlife Milk Alternative 1 Litre– Ordrs
Alpro Oat Longlife mmiri ara ehi Alternative 1 Liter
Boosting gị eri oriri dịtụbeghị ezigbo ụtọ Alpro Oat ihe ọ drinkụ richụ bara ụba na eriri nwere ụtọ nro na nke uto. Nye gị nri ụtụtụ a igba mmalite nke mere na ị dị njikere ijide ụbọchị! Dị ka o kwesịrị ịdị obere n’ụba abụba. Mbelata oriri nke abụba zuru ezu na-atụnye ụtụ na ndozi nke ọkwa cholesterol dị n'ọbara.A na-atụ aro ụdị nri dị iche iche na ezi ndụ dị mma maka ahụike dị mma. Ọ dị mma maka mbara ala Alpro na-eji obere ala na mmiri eme ihe ma mepụta obere CO2 karịa mmiri ara ehi mmiri ara ehi.